COVID-19 / Flu-A / Flu-B Multiplex RT-PCR yekuona kit (Lyophilized)
Iyo New Coronavirus (COVID-19) iri kupararira pasi rese. Zviratidzo zvekiriniki zve COVID-19 uye hutachiona hutachiona hutachiona hwakafanana.
COVID-19 mutation Multiplex RT-PCR yekuona kit (Lyophilized)
Iyo New Coronavirus (COVID-19) ndeye Imwe-yakamisikidzwa RNA Virus ine kazhinji kazhinji shanduko. Iwo makuru ekuchinja maratidziro munyika iBritish B.1.1.7 neSouth Africa 501Y.V2 akasiyana.
Novel Coronavirus (2019-nCoV) RT-PCR Yekutsvaga Kit (Lyophilized)
Novel Coronavirus (COVID-19) ndeye β genus coronavirus uye iri tambo yakanaka yeRNA imwechete ine dhayamita ingangoita 80-120nm. COVID-19 chirwere chakanyanya kufema chinotapukira. Vanhu vanowanzo kubatwa neCOVID-19.
Listeria monocytogenes PCR Yekuona Kit
Listeria monocytogenes igiramu-yakanaka microbacterium inogona kukura pakati pe4 ℃ kusvika 45 ℃. Icho chimwe chezvirwere zvikuru zvinotyisidzira hutano hwevanhu mune chikafu chemufiriji.